Gqiba & unyango Ubushushu-K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek Machining Co, Ltd inokukwenza ngokwezifiso ukuveliswa kwazo zonke iintlobo zamacandelo oomatshini ngokuchaneka ngokweemfuno zabathengi, iimveliso ezinxulumene noomatshini, i-elektroniki, oomatshini, ezemoto, ezonyango, amandla amatsha kunye nezinye iinkalo. Sidlulile kwi-ISO9001: isiqinisekiso se-2015, ngoku sinabasebenzi abangama-200.
Imveliso yethu malunga neepesenti ezingama-20 zithunyelwa eJapan, i-60% ithunyelwe ngaphandle eYurophu naseMelika, sinokukunika umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana. Izinto zethu eziqhelekileyo ziyintsimbi engenasici, i-aluminium, ubhedu, isinyithi esincinci, iiplastiki zobunjineli kunye nezinye iintlobo zensimbi ye-alloy, sinokubonelela ngonyango lokushisa kunye nonyango olwahlukeneyo lwabathengi:
Emva kweminyaka elishumi yophuhliso, i-K-Tek ayinalo kuphela inani elikhulu labasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nezobuchwephesha kunye neqela lolawulo olugqwesileyo, kodwa ineqela lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuvumela abathengi abaninzi ukuba basazi, sihlala sisiya kwihlabathi ukuya kuthatha inxaxheba kwimiboniso, enje nge-United States, i-United Kingdom, iJamani, iJapan njalo njalo. Siye sazi inani elikhulu labathengi kulo mboniso, ngaxeshanye, abathengi abaninzi bamanye amazwe beze kutyelela umzi-mveliso weK-Tek kwaye baxoxa ngemicimbi yokusebenzisana. Inkxaso yakho lolona khuthazo lukhulu kuthi. Sinethemba lokubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kubaxumi abaninzi abasweleyo. Siyakumema ngokunyanisekileyo ukuba usebenzisane kunye nokuphuhlisa kunye.